42 Jakobho akazoona kuti kuIjipiti kwaiva nezviyo.+ Jakobho akabva ati kuvanakomana vake: “Munorambirei makatarirana?” 2 Akawedzera kuti: “Tarirai ndanzwa kuti kuIjipiti kune zviyo.+ Endai ikoko mutitengere, kuti tirambe tiri vapenyu, tirege kufa.” 3 Naizvozvo vakoma+ vaJosefa gumi vakaenda kunotenga zviyo kuIjipiti. 4 Asi Jakobho haana kutuma Bhenjamini,+ munun’una waJosefa, pamwe chete nevakoma vake, nokuti akati: “Zvimwe angawirwa nenjodzi inouraya.”+ 5 Naizvozvo vanakomana vaIsraeri vakaenda pamwe chete nevamwe vakanga vachienda kunotenga, nokuti nzara yaiva munyika yeKenani.+ 6 Josefa ndiye murume aiva nesimba panyika yacho.+ Ndiye aitengesera vanhu vose vomunyika.+ Naizvozvo vakoma vaJosefa vakasvika vakamukotamira zviso zvavo zvakatarira pasi.+ 7 Josefa paakaona vakoma vake, akabva avaziva, asi akaita kuti ivo vasamuziva.+ Naizvozvo akataura navo nehasha akati kwavari: “Mabva kupi?” ivo vakati: “Kunyika yeKenani kuti tizotenga zvokudya.”+ 8 Nokudaro Josefa akaziva vakoma vake, asi ivo havana kumuziva. 9 Josefa akabva ayeuka hope dzaakanga arota pamusoro pavo,+ uye akati kwavari: “Muri vasori! Mauya kuzoona kuti nyika haina kudzivirirwa papi!”+ 10 Ivo vakabva vati kwaari: “Aiwa, ishe wangu,+ asi vashandi venyu+ vauya kuzotenga zvokudya. 11 Tose zvedu tiri vanakomana vomunhu mumwe. Tiri varume vakarurama. Vashandi venyu havasi vasori.”+ 12 Asi akati kwavari: “Handizvo! Nokuti mauya kuzoona kuti nyika haina kudzivirirwa papi!”+ 13 Ivo vakati: “Vashandi venyu vana gumi nevaviri vomunhu mumwe.+ Tiri vanakomana vomunhu mumwe+ ari munyika yeKenani; gotwe rina baba vedu nhasi,+ asi mumwe wacho haachipo.”+ 14 Zvisinei, Josefa akati kwavari: “Ndizvo zvandakuudzai, ndichiti, ‘Muri vasori!’ 15 Muchaedzwa nezvizvi. NaFarao mupenyu, hamungabudi muno kunze kwokuti munun’una wenyu wegotwe auya pano.+ 16 Tumai mumwe wenyu kuti anotora munun’una wenyu imi makasungwa, kuti mashoko enyu aedzwe kuti ndeechokwadi here.+ Kana zvisina kudaro, naFarao mupenyu, muri vasori.” 17 Naizvozvo akavaisa pamwe chete muchitokisi kwemazuva matatu. 18 Pashure paizvozvo Josefa akati kwavari pazuva rechitatu: “Itai izvi murambe muri vapenyu. Ndinotya+ Mwari wechokwadi. 19 Kana makarurama, mumwe wevana vababa venyu ngaachengetwe akasungwa ari muchitokisi chenyu,+ asi vamwe vose endai henyu, torai zviyo nokuda kwenzara iri mudzimba dzenyu.+ 20 Mozouya nomunun’una wenyu wegotwe kwandiri, kuti mashoko enyu ave akavimbika; uye hamuzofi.”+ Ivo vakaita saizvozvo. 21 Zvino vakataurirana vachiti: “Chokwadi tine mhosva pamusoro pomunun’una wedu,+ nokuti takaona kutambudzika kwomweya wake paakatiteterera kuti timunzwire tsitsi, asi hatina kuteerera. Ndokusaka kutambudzika uku kwatiwira.”+ 22 Rubheni akabva avapindura kuti: “Handina here kuti kwamuri, ‘Musatadzira mwana,’ asi hamuna kuteerera?+ Zvino ropa rake, tarirai riri kubvunzwa.”+ 23 Asi ivo havana kuziva kuti Josefa akanga akateerera, nokuti paiva nomuturikiri pakati pavo. 24 Naizvozvo akabva kwavari akatanga kusvimha misodzi.+ Akabva adzoka kwavari, akataura navo, akatora Simiyoni+ kwavari akamusunga vachizviona.+ 25 Pashure paizvozvo Josefa akarayira, vakazadza midziyo yavo nezviyo. Uyewo, vaifanira kudzorera mari yevarume vacho musaga romunhu mumwe nomumwe+ uye kuvapa mbuva yorwendo.+ Naizvozvo vakaitirwa saizvozvo. 26 Nokudaro vakatakudza mbongoro dzavo zviyo zvavo vakaenda vachibva ikoko. 27 Mumwe paakavhura saga rake kuti ape mbongoro yake zvokudya panzvimbo yokurara,+ akaona mari yake iri mumuromo wehomwe yake.+ 28 Akati kuvana vababa vake: “Mari yangu yadzoswa uye onai iri muhomwe yangu!” Mwoyo yavo yakabva yapera simba, zvokuti vakatarirana vachibvunda,+ vachiti: “Chii ichi chataitirwa naMwari?”+ 29 Vakazosvika kuna Jakobho baba vavo kunyika yeKenani, vakavaudza zvinhu zvose zvakanga zvavawira, vachiti: 30 “Murume ari ishe wenyika yacho akataura nesu nehasha,+ nokuti akatifungira kuva varume vaisora nyika yacho.+ 31 Asi takati kwaari, ‘Tiri varume vakarurama.+ Hatisi vasori. 32 Tiri vana gumi nevaviri vomunhu mumwe,+ vanakomana vababa vedu.+ Mumwe chete haasisipo,+ uye muduku nhasi ana baba vedu munyika yeKenani.’+ 33 Asi murume ari ishe wenyika yacho akati kwatiri,+ ‘Ndichaziva neizvi kuti makarurama:+ Siyai mumwe wenyu aneni.+ Ibvai matora chimwe chinhu nokuda kwenzara iri mudzimba dzenyu muende.+ 34 Uyai nomunun’una wenyu wegotwe kwandiri, kuti ndizive kuti hamusi vasori asi makarurama. Ndichakudzorerai mwana wababa venyu, uye mungatenga munyika yacho.’”+ 35 Zvino pavakanga vachidurura masaga avo tarira tsapo yemari yomumwe nomumwe yaiva musaga rake. Ivo pamwe chete nababa vavo vakaona tsapo dzavo dzemari, vakatya. 36 Jakobho baba vavo vakabva vati kwavari: “Ini ndini wamaita kuti ndishayikirwe!+ Josefa haasisipo uye Simiyoni haasisipo,+ uye muchatora Bhenjamini! Zvinhu zvose izvi zvandiwira!” 37 Asi Rubheni akati kuna baba vake: “Kana ndikasadzoka naye kwamuri mungauraya henyu vanakomana vangu vaviri.+ Ndipei ndimutarisire, uye ndini ndichafanira kumudzosa kwamuri.”+ 38 Zvisinei, iye akati: “Mwanakomana wangu haangaendi nemi, nokuti mukoma wake akafa uye asiyiwa ari oga.+ Kana njodzi inouraya ikamuwira parwendo rwamungafamba, ipapo muchaburutsira bvudzi rangu jena muSheori+ neshungu.”